Dheerina, safaraa fi amaloota qajeelchaa sararoota gara filatamanitti jijjiira.
Haalata sararichaa ykn xiyyaa haalata gara sararaa fooyyeessuuf Dhangii -Sararaafiladhu.
Halqara baafataa Baldhinaafi dheerina Sararaa, Keessa Garoota.
Kamshaa Sararootaa fi xiyyoota irraa, sajoo Sarara Garaa cuqaasi.
Amaloota fageenyicha sarara garaa fi gajeelchoota walin wal madaalchisuuni fi sarjalichaan wal bira qabuun qindeessa.
Fageenya sarara garad fi sarjalicha gidduu jiruu murteessi(fageenya sararaa=0).
Dheerina bitaa fi mirga qajeelchoota sarjala irraa jalqabee murteessa(fageenya sararaa=0). Gatiin pozetivii qajeelchichaa sarjalaalitti dheeressa gatiin meqatilli immoo qageelchoota kana Sarjalichaan gara gaditti dheeresa.
Sarara garaa irraa jalqabuun dheerin mirgaa fi bitaa qajeelchootaa murteessa. Gatin possetivii qajeelchicha sarara garaa outti yomuu dheereessuu gatiin negaativii immoo sarara garaatin gara gaditti dheereessa.
Sarara gara irra jalqabuun dheerina qajelchicha bitaa murteessa. Gatiin pozetivii qajeelchicha sarara gara irraa gara gaditti yomuu dheeresu gatiin negaativii ammoo qajeicha Sarara garaa irraa gara olitti dheereessa.
Sarara garaa irraa jalqabuun dheerina qajeeichicha mirgaa murteessa. Gatiin pozetivii qajelchiicha sarara garaa irraa gara gaditti yemuu dheereessu gatiin negaativii ammo qajecha irraa gara olitti dheereessa.
Sarara gara wantichaan gadii
Naannawaa Sararaa amaloota faalleessa.
Iddoowwan lakkofsicha deecimaali ammaloota sarara mul'isuuf fayyadan murteessa.
Amaloota gara barreeffamichaa qindeessa.
Qubannoo gara barreeffamaa gara sarara fi qajeelchi diaanwal bira qabuun ibsa.
Qubannoo barreeffamaa ramaduu keetiin duratti irraan gadeen ofmaa fi dalgeen ofmaa haalojii qulqullaa'uu qaba.
Gara irrangadee mija'aa gara barreeffamichaaf ibsa.
Gara mija'aa ddalgee gara barreeffamichaaf ibsa.
Yuunitoota safaraa mul'isi
Safara gara kuuniti safaraa tarree keessaa mul'isuu barbaadduu filachuu dandeessa.
Barreeffama walmaddii gara Sararichaati yookin 90 digrii sararichati agarsisa.
Title is: Gareessuu